Hogamiye Farmaajo oo hambalyeeyay dhigiisa Jabuuti.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa u diray dhiggiisa dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, dowladda iyo guud ahaan shacabka dalka Jabuuti hambalyo ku aaddan sannad guuradii 43-aad ee kasoo wareegtay xornimada Jamhuuriyadda Jabuuti.
Hogamiye Farmaajo ayaa tilmaamay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay maanka ku hayaan garab istaagga iyo naf-hurnimada reer Jabuuti ay u muujiyeen Soomaaliya, taas oo garab weyn u ahayd dowlad-dhisidda iyo samata-bixinta Soomaaliya.
“Xukumadda iyo shacabka reer Jabuuti hiilka iyo garab istaagga hagar la’aaneed ee aad noo muujiseen gaar ahaan wakhtiyadii adkaa waa mid aan marnaba ilaawi doonin, waa mid shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay idiin ogsoon yihiin”.
Hogamiye Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa shaciyey doorkii ay ku lahaayeen shacabka halgankii xornimo doonka ahaa ee walaalaheen Jabuuti, waxa uuna xoojiyay xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal.
Hogamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u rajeeyay shacabka reer Jabuuti iyo Hogamiye Ismaaciil Cumar Geelle isku duubni, nabad waarta iyo horumar dhinac walba ah.